कोरोना संक्रमणबाट बच्न कुन मास्क कति प्रभावकारी? – Suchana Hub
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने उपायहरूबारे त तपाईं-हामीले अहिलेसम्म धेरै नै पढिसकेका छौं, धेरै नै सुनिसकेका छौं। तर, घना बस्ती भएका ठाउँमा हिँडडुल गर्न बाध्य हुनेहरूका लागि कोरोना भाइरसबाट जोगिन अहिले विज्ञ चिकित्सकहरूले केही सामान्य र व्यवहारिक सुझाव दिइरहेका छन्। भिड भाडमा जानको लागि भने मास्कको प्रयोग अनिबार्य नै जस्तै भएको छ। तर तपाइले प्रयोग गर्ने मास्क कति सम्म प्रभाबकारी छ त ? आम मानिस र चीकित्सकले प्रयोग गर्ने विभिन्न मास्कको किटाणु र संक्रमण रोक्न कति प्रभावकारी छन् त?
यी केहि मास्कको प्रभावकारिता यस प्रकार छ
Previous काठमाडौं उपत्यकामा थप ९२ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि
Next अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवाहरु १५ दिनका लागि बन्द